Ngokungafani nabaningi abadumile, akucasuli ngentshisekelo eqhubekayo yabalandeli nezintatheli. U-Angelica Rivera ungumdlali ovelele odlala kumafilimu adumile njenge "Mistress" no "Simply Maria". Ubuye unina wezingane eziyisithupha, umculi nomama wokuqala waseMexico. Ingabe akwanele ukuba ube i-heroine yochungechunge lwakhe lwe-soap opera okuthiwa "Life"?!
Amehlo amakhulu ama- brown nomzimba omnandi wamsiza ukuba avele. Eqinisweni, u-Angelica Rivera waqala ukusebenza njengesibonelo ngesikhathi esemncane futhi akazange aqoshwe kuphela eMexico, kodwa naseMelika, kanye nezentengiso zaseJapane. Lapho le ntombazane inikezwa indima ebhayisikobho, naye akazange akhathazeke. Kodwa u-Angelica akazange anqobe ukuthandwa kuphela ngedatha yakhe yangaphandle. Uma i-Rivera efakwe ezinkundleni zothando, khona-ke uhlamvu lwakhe aluzange lubheke. Nciphisa ukunganaki nokuzwela - yilokho intombazane esetshenziselwa ukugcizelela uhlamvu lomlingiswa odlalwayo.
Iseluleko esivela kunkanyezi
Ngesikhathi u-Angelika Rivera ethola iseluleko esihle kakhulu kuVeronica Castro ngokwakhe: "Ukuze abe inkanyezi, umuntu kumele abe ngumfazi omuhle, umama nodadewabo." Futhi le ntombazane yazama ukulandela lesi simiso. Mhlawumbe yingakho isimiso somsebenzi onjalo esibucayi ngaso sonke isikhathi sakwazi ukubukeka sisencane futhi sisha. Ubuka ukubukeka kwakhe nsuku zonke - uyangena emidlalweni, uhambela ekudleni futhi asebenzise ama-creams avuselelayo. Lokhu kuyadingeka ukuba u-Angelique angakhulumi nje kuphela umsebenzi wakhe. Ukugcina indlela enjalo yokuphila kuvumela uRivera ukuba afiseke umyeni wakhe futhi agcwele amandla ukuze enze izingane zijabule.
Ukuzikhandla kanye nethalenta
Uma udinga ukufunda okuthile ngendima, kungakhathaliseki ukuthi i-scuba diving, ukugibela amahhashi noma ukudlala i-saxophone, intombazane iyayenza ngenjabulo. Futhi uma u-Angelika Rivera esaba kakhulu izinyoka namagundane, izethameli ngeke ziqagele ngakho. Ezikrinini ze-TV, abalingiswa bakhe banesibindi futhi abanesibindi. Izwi likaRivera lingenye into ekhanyayo yethalenta lakhe. Ngaphezu kwalolu chungechunge, wahlabelela futhi esiteji. Ngokuqinisekile, wonke umuntu ukhumbula i-duet ye-Angelique noRicky Martin. Ngakho-ke, wayekhethwa ngokuphindaphindiwe futhi wanikezwa njengomculi nomdlali ongcono kakhulu kuMexico kuphela, kodwa nakwamanye amazwe.
Ngesikhathi u-Angelika Rivera, owaziwa yizo zonke izici zochungechunge lwe-TV yaseMexico, wathandana nomkhiqizi uVeronica Castro, wayengalindele ngisho nokuthi umshado kuzodingeka ulinde iminyaka engu-14. Futhi kuphela okuhlangenwe nakho kwezingane "ezingekho emthethweni" kwaholela eqinisweni lokuthi umama nobaba wabo babeshadile. Kodwa kwakuyinto nje yokukhohlisa komkhaya ojabulayo. Ngokushesha ngemva komshado, kwenzeka okuthile. Indoda yamcasula kakhulu u-Angelica. Akazange asho kahle, kodwa wagcizelela ukuthi akadingi isihawu somuntu.
Ngonyaka ka-2008, u-Enrique Nieta wayengumbusi waseMexico City, okuyinto enzima kakhulu ngokumelene nempi yezidakamizwa nezikhathi zenkohlakalo. Wazi ngalokhu hhayi ngokuzwa: bazama ukulwa nabantwana bakhe. U-Angelika Rivera wabamba iqhaza ekuqopheni ifilimu yenkampani yezombusazwe ye-Nieta ukuheha izivakashi ezweni. Emhlanganweni wokuqala, le ntombazane yahlatshwa umxhwele nokubonakala okumangalisayo kuka-Enrique, kodwa ngemuva kokudla isidlo esitolo lapho lo mdlali eqaphela khona: lo muntu osondelene naye. Njengoba u-Angelica wamukelwa kamuva, wayekhathazekile kakhulu ngalolo suku, kodwa, kodwa, isidlo sasibhekile kuze kube sekuhlwa, ngoba wayengafuni ukuhlukanisa no-Enrique.
Empilweni yangempela, uNiet wayehluke ngokuphelele kulo mbusazwe, owathandana naye ngezindaba zothando. Yena kusukela ezinsukwini zokuqala wathola inhliziyo kaRivera, kodwa ubuhlobo babo bukhula kancane kancane. U-Angelica wathinteka ekujuleni kwenhliziyo yakhe ngezipho ezibizayo, kodwa wayekhathalela njalo u-Enrique mayelana nenduduzo yakhe. Ngakho-ke, lapho uNizeta emcela ukuba abe ngumakoti, lo mdlali wabiza ngokushesha. Yiqiniso, le ntombazane yaqala ukubonisana nezingane zayo. Abazange baphikise.
U-Angelica Rivera, u-filmography wakhe ukhulu kakhulu, ohlukanisile noCastro, nomkakhe ka-Enrique. Kodwa abacabangi ngisho nokuthatha indawo yalabo abangasekho ezinhliziyweni zezingane zabo. Uma kuziwa ngemizwa yezingane, azikho ukudlala esidlangalaleni. Ngakho-ke, ngezimpelasonto, bonke baya e-cottage yezwe, ngaphandle kokubona amehlo. U-Angelica no-Enrique basenabo ubudlelwane obukhuni: ukudla kwasekuseni ndawonye kanye ne-SMS eningi kulo lonke usuku.
Lezi zibhangqa zikwazi ukuhlanganisa impilo nokuphila komuntu siqu. Lapho uRivera ebuzwa ngesimo sakhe sengqondo eziphathimandla, uyaphendula: "Kuyasiza ekukhuliseni izingane. Ekugcineni, bayoba abantu abafanelekile. " Amadodakazi akhe asebenza kanzima. Ngaphandle kwesikole, amantombazane ahlanganyela ngokubhukuda nokudansa. Futhi umama wabo, u-Angelika Rivera (isithombe ngenhla) usalokhu ehlala kubantu abaningi ekuboniseni okuhle, ngoba:
Unolwazi futhi udumile.
Okuhle kakhulu futhi kucebile.
Uhlakaniphile futhi ujabule empilweni yakhe.
Kwabaningi kuyobonakala kubonakala kungenangqondo futhi kungatholakali. Kodwa empeleni, okuphambene kuyiqiniso. Ukuzikhandla nje kuka-Angelika kwamvumela ukuba akhiphe isopha yakhe opopayi empilweni yangempela. Futhi, njengoba ubona, ukuphela kwalolu chungechunge kwajabula!